BatteryFullAlert: ampahafantaro ny iPad anao rehefa voampanga izy (Cydia) | Vaovao IPhone
BatteryFullAlert: asaivo mampandre anao ny iPad rehefa voampanga (Cydia)
Isan'andro isika dia tsy maintsy miaritra ireo batterie falifaly amin'ireo fitaovana teknolojia rehetra ankehitriny: finday avo lenta, takelaka ary fitaovana maro hafa. Tao anatin'izay taona faramparany dia be ny resaka momba ny fiainana bateria an'ny iDevices, izay araka ny filazan'ny mpampiasa sasany ny fanavaozana ny iOS maharitra ela kokoa, ary rehefa manavao ny rafitra fiasa izy ireo dia maharitra antsasaky ny zavatra naharetan'izy ireo taloha. Misy fanalahidy hitazomana ny batterie ho voaozona foana ao amin'ny fitaovantsika? Anio dia hasehoko anao ny tweak Cydia antsoina hoe BatteryFullAlert izay manolotra fampandrenesana anay fotsiny amin'ny fomba am-baravarankely izay miseho rehefa voampanga 100% ny fitaovana iOS, ary koa mampiseho vaovao hafa
Makà iPad hampandre anao rehefa voatsimpona feno amin'ny BatteryFullAlert ny bateria
Araka ny nolazaiko anao, ny BatteryFullAlert dia Cydia tweak vaovao mifanentana amin'ny iOS 7 izay mamela ny iPad hampandre rehefa misy bateria zato isan-jato ny bateria. Mety hieritreritra ianao fa ny iOS 7 dia mampiseho amintsika ny isan-jaton'ny bateria amin'ny fitaovantsika fa misy kosa ny fanitsiana izay manala izany fampahalalana izany amin'ny tsipika fitadiavana. Azonao atao ny mahita ilay tweak maimaimpoana ao amin'ny repo ofisialin'ny BigBoss.
Andao hojerentsika, rehefa ampidirintsika amin'ny hazavana ilay fitaovana, dia handoa vola ara-dalàna toy ny mahazatra azy foana isika fa rehefa mahatratra 100% ny vidiny BatteryFullAlert dia handefa fampandrenesana amin'ny fomba am-baravarankely miampy feo kely izany dia hampitandrina antsika fa afaka mampifandray azy amin'ny arus isika.
Amin'ny fampandrenesana hitantsika eo amin'ny efijery hidin-trano (na amin'ny toerana misy antsika raha mampiasa azy isika) dia ho hitantsika koa ny hafanana ao Degre Celsius Izy io dia manana ny bateria ananan'ny iPad na ny iPhone raha sendra mandinika ny BatteryFullAlert amin'ny finday Apple isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » BatteryFullAlert: asaivo mampandre anao ny iPad rehefa voampanga (Cydia)
Ahoana ny fananana ny bokotra fiantsoana an'ny iOS 7.1 miaraka amin'ny jailbreak sy Button4Phone
BetterPowerDown - ampio fomba fanakatonana iOS 7.1 ho an'ny iOS 7 (Cydia)